Usizi lweNingizimu Afrika ngosuku lwesine | Scrolla Izindaba
Usizi lweNingizimu Afrika ngosuku lwesine
Ekupheleni kosuku lwesithathu lokuHlolwa phakathi kwamaProteas nePakistan e-The National Stadium e-Karachi, bekusenenhlansi yethemba lokuthi amaProteas angakhipha unogwaja esigqokweni – kodwa lokho bekunguLwesine.
Lokho kwakungaphambi kokuthi bephume ngokulandelana abashayi bebhola baseNingizimu Afrika besebenzise isikhathi sabo ukuphakamisa ifulegi elimhlophe bephakamisela iPakistan ehlaselayo.
Uma ngibheka emuva, ukuwa bekungenakugwemeka. Kuqale kuma-overs amathathu okugcina osuku lwesithathu lapho uFul du Plessis obedinwe evelela ebuya ku-crease, ethola ama-run ayi -10, wabe esehamba – esadangele – ebuyela la abashintshela khona. UKeshav Maharaj uphume njengomqaphi (njalo okuyinto engabazwayo), ulokhu ezungeze isikhathi eside ngokwanele wabhekana namabhola ayisikhombisa, wathole nama-run amabili ngokukhishwa kahle nguHasan Ali.
Namuhlanje ekuseni, uTemba Bavuma onesibindi uzuze ama-run angama-40 emabholeni angama-95 – njengoba iqembu lonke liwele ngakuye. Phakathi kukakaputeni uQuinton de Kock (2), uGeorge Linde (11), uKagiso Rabada (1), uAnrich Nortje (0) noLungi Ngidi (3 abangaphumanga), bakwazile ukwenza ama-run ayi-17, bashiya iPakistan yathola amaphuzu angama-90 kwamathathu kwaba ukuwina umdlalo.
Okushiwo nguShaun Pollock ngemuva komdlalo kubalulekile, hhayi lokho akushilo, kodwa angakushongo.
“INingizimu Afrika ayilahlekelwanga wuchungechunge.” Obekufanele akwengeze, ukusho ukuthi mhlawumbe kunjalo.
AmaProteas anomsebenzi omningi okufanele awenze. Futhi ngaphambi kokuba bacabange nokuthi yini engahambanga kahle enkundleni kufanele banakekele isimo sabo sengqondo. Ukuzimisela kwabo ukuhlulwa kuyihlazo. Noma ngabe kunenkinga egumbini lokushintshela noma kunenkinga nge-Cricket South Africa, kumele bazikhumbuze ukuthi bayiqembu elikhulu lezwe, futhi banesibopho kubathandi bekhilikithi ekhaya, isizwe, nakubona uqobo lwabo (ababizwa nje ngeqembu lesizwe mahhala). Lokhu kubizwa ngokuthi umoya wokulwa.
Umthombo wesithombe: @OfficialCSA